Isivivinyo sokuguga kwe-UV nokushisa - i-Yuyao Jera Line Fitting Co, Ltd.
Ukuhlolwa kokuguga kwe-UV nokushisa okunye okubizwa ngokuthi ukuhlolwa kokuguga kwesimo sezulu ukuhlola ikhwalithi yezinto zokwakha noma imikhiqizo uma ihlangabezana nokusebenza okulindelekile nempilo yonke. Lokhu kuhlolwa kulingisa izimo zezulu ezahlukahlukene, njengomswakama ophezulu, imisebe ephezulu ye-UV kanye nokushisa okuphezulu.
Siqhubeka nokuhlola cishe kuyo yonke imikhiqizo yekhebula ephezulu
Izixhumi zokubhoboza ezifakwa ngaphakathi
-Ikhebula le-optic optic
-Fiber optic splice ukuvalwa
-FTTH uphonsa ikhebula ngocingo
Igumbi lokuhlola lenziwe ngaphambilini ngokuzenzakalela, elingagwema amaphutha abantu ukuqinisekisa ubuqiniso nokunemba kokuhlolwa. Inqubo yokuhlolwa kokuguga kwesimo sezulu ifaka imikhiqizo efakwa egumbini elinomswakama osethiwe, imisebe ye-UV, izinga lokushisa.
Isivivinyo esenziwe kwangaphambili ngemijikelezo eyishumi nambili yemibandela ekhuphukayo nokwehla eshiwo. Umjikelezo ngamunye uhlanganisa amahora athile ezimo zezulu ezinolaka. Konke kulawulwa yi-radiometer, i-thermometer njll. Imisebe, izinga lokushisa, isilinganiso somswakama nesikhathi kunamanani ahlukile emazingeni EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 yezinsiza zokusabalalisa ugesi, kanye ne-IEC 61284 ngaphezulu ikhebula le-fiber optic, nezinsiza.